Atemmufo 6 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
6 Na Israelfo fii ase yɛɛ Yehowa ani so bɔne,+ enti Yehowa de wɔn hyɛɛ Midian+ nsa mfe ason. 2 Na Midian dii Israel so.+ Midian nti Israelfo hwehwɛɛ amoa wɔ mmepɔw mu, na wɔhwehwɛɛ abodan ne hintabea nso.+ 3 Sɛ Israelfo yɛ afuw a,+ na Midianfo ne Amalekfo+ ne Apueifo+ abɛtow ahyɛ wɔn so. 4 Wɔboaboa wɔn ano ne wɔn ko, na wɔsɛe wɔn asase so nnɔbae nyinaa kosi Gasa, na wonnyaw aduan anaa oguan anaa nantwi anaa afurum biara wɔ Israel.+ 5 Wɔde wɔn mmoa ne wɔn ntamadan nyinaa ba. Na wɔba yuu te sɛ mmoadabi;+ wɔne wɔn yoma nni ano,+ na wɔba asase no so bɛsɛe no.+ 6 Midianfo yi nti, ohia fitaa kaa Israelfo no. Afei Israelfo su frɛɛ Yehowa.+ 7 Bere a Midianfo haw Israelfo ma wosu frɛɛ Yehowa no,+ 8 Yehowa somaa odiyifo+ bi baa Israelfo nkyɛn bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea Israel Nyankopɔn Yehowa se ni, ‘Me na miyii mo fii Egypt+ de mo fii nkoafie bae.+ 9 Migyee mo fii Egypt ne wɔn a wɔhaw mo nyinaa nsam, na mepam wɔn fii mo anim, na mede wɔn asase maa mo.+ 10 Bio nso meka kyerɛɛ mo sɛ: “Mene Yehowa mo Nyankopɔn.+ Munnsuro Amorifo a mote wɔn asase so+ no anyame.”+ Nanso moantie me.’”+ 11 Akyiri yi Yehowa bɔfo+ bɛtenaa odupɔn a esi Ofra no ase, Abiesarni+ Yoas dupɔn no. Saa bere no na ne ba Gideon+ reporow awi wɔ nsã-kyi-amoa mu, sɛnea Midianfo no renhu. 12 Afei Yehowa bɔfo no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkatakyi kokodurufo, Yehowa ka wo ho.”+ 13 Ɛnna Gideon ka kyerɛɛ no sɛ: “Me wura, mesrɛ wo, sɛ Yehowa ka yɛn ho ampa a, dɛn nti na awie yɛn sɛɛ yi?+ N’anwonwade+ a yɛn agyanom kaa ho asɛm kyerɛɛ yɛn+ no wɔ he? Wɔkae sɛ, ‘Ɛnyɛ Egypt na Yehowa yii yɛn fii?’+ Na afei de Yehowa apo yɛn,+ na ɔde yɛn ahyɛ Midianfo nsa.” 14 Na Yehowa dan n’ani kyerɛɛ no kae sɛ: “Fa ahoɔden a wowɔ yi ara kɔ,+ na wubegye Israelfo afi Midianfo nsam.+ Ɛnyɛ me na meresoma wo?”+ 15 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yehowa, mesrɛ wo. Dɛn na mede begye Israel?+ Manase abusuakuw mu nyinaa, m’asafo* na esua, na mene akumaa wɔ m’agya fie.”+ 16 Na Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Medi w’akyi,+ na wobɛsɛe Midianfo+ te sɛ onipa biako bi.” 17 Na obuaa no sɛ: “Sɛ m’anim aba nyam wɔ w’anim+ a, ɛnde yɛ sɛnkyerɛnne bi ma minhu sɛ wo na wo ne me rekasa.+ 18 Mesrɛ wo mfi ha nkɔ+ kosi sɛ mɛba wo nkyɛn de m’ayɛyɛde abesi w’anim.”+ Na ɔkae sɛ: “Mɛtena ha atwɛn akosi sɛ wobɛba.” 19 Na Gideon kɔpɛɛ abirekyi ba+ bi noae, na ɔde esiam efa biako yɛɛ paanoo a mmɔkaw nnim.+ Afei ɔde nam no guu kɛntɛn mu de ɛho nsu no nso guu kuku mu, na ɔde brɛɛ no wɔ dupɔn no ase. 20 Na nokware Nyankopɔn bɔfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Fa nam ne paanoo a mmɔkaw nnim no kosi ɔbotan kɛse no so,+ na hwie ɛho nsu no gu so.” Na ɔyɛɛ saa. 21 Afei Yehowa bɔfo no de poma a okura no ano kaa nam ne paanoo no, na ogya fi ɔbotan no mu bɛhyew nam ne paanoo no.+ Na Yehowa bɔfo no yera fii n’anim. 22 Afei Gideon hui sɛ ɛyɛ Yehowa bɔfo.+ Enti Gideon kae sɛ: “Ei, Awurade Tumfoɔ Yehowa! Yehowa bɔfo na mahu n’anim yi!”+ 23 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Asomdwoe nka wo,+ nsuro.+ Worenwu.”+ 24 Afei Gideon sii afɔremuka+ wɔ hɔ maa Yehowa, na wɔfrɛ+ no Yehowa-Salom besi nnɛ. Ɛwɔ Abiesarfo kurow Ofra+ mu. 25 Saa anadwo no, Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Fa wo papa nantwinini a ɔto so abien a wadi mfe ason no, na bubu Baal afɔremuka+ a wo papa sii no, na twa ɔbosom dua a ɛwɔ ho no.+ 26 Afei hyehyɛ abo fa yɛ afɔremuka ma Yehowa wo Nyankopɔn wɔ aban yi atifi, na twitwa ɔbosom dua a wubetwa no mu asinasin na fa nantwinini a ɔto so abien yi bɔ ɔhyew afɔre wɔ so.” 27 Enti Gideon yii ne nkoa no mu mmarima du sɛ wɔrekɔyɛ nea Yehowa aka akyerɛ no no.+ Nanso na osuro ne papa fiefo ne kurom hɔfo, enti wanyɛ adwuma no awia; ɔyɛɛ no anadwo.+ 28 Anɔpahema a kurom hɔfo sɔree no, wɔnkɔhwɛ a, Baal afɔremuka na wɔabubu no yi, na ɔbosom dua+ a ɛwɔ ho no nso na wɔatwa yi! Ná wɔde nantwinini a ɔto so abien no nso abɔ afɔre wɔ afɔremuka a wɔasi no so. 29 Na wobisabisaa wɔn ho sɛ: “Hena na ɔyɛɛ saa ade yi?” Ɛnna wofii ase hwehwɛɛ mu. Akyiri yi wɔkae sɛ: “Yoas ba Gideon na odii saa dwuma yi.” 30 Enti kurom hɔfo ka kyerɛɛ Yoas sɛ: “Fa wo ba no bra ma yenkum no,+ efisɛ wabubu Baal afɔremuka na watwa ɔbosom dua a ɛwɔ ho no nso.” 31 Afei Yoas+ ka kyerɛɛ nnipa a wɔbaa no so no nyinaa sɛ:+ “Mo na mubedi Baal asɛm ama no, anaa mo na mubegye no? Nea ɔbɛka Baal asɛm ama no no, wonkum no anɔpa yi ara.+ Sɛ ɔyɛ Onyankopɔn+ na obi abubu n’afɔremuka a, momma ɔno ara nka n’asɛm.”+ 32 Enti da no ara, ɔtoo no din Yerubaal,+ na ɔkae sɛ: “Obi abubu Baal afɔremuka a, momma ɔno ara nka n’asɛm.”+ 33 Na Midianfo+ ne Amalekfo+ ne Apueifo+ nyinaa boaa wɔn ano+ kutuu na wotwa baa Yesreel+ bon mu. 34 Afei Yehowa honhom+ beduraa Gideon ho, na ɔhyɛn abɛn+ frɛɛ Abiesarfo+ bedii n’akyi. 35 Bio nso, otuu abɔfo+ kɔɔ Manase asase nyinaa so, na wɔn nso bedii n’akyi. Na otuu abɔfo foforo kɔɔ Aser ne Sebulon ne Naftali nsase so, na wobehyiaa no. 36 Na Gideon ka kyerɛɛ nokware Nyankopɔn no sɛ: “Sɛ wonam me so begye Israel, sɛnea woaka no a,+ 37 ɛnde mede oguan nhwi rekɔhata awiporowbea. Sɛ obosu fɔw oguan nhwi no nkutoo, na fam hɔ nyinaa wo a, mehu ampa sɛ wonam me so begye Israel, sɛnea woaka no.” 38 Na saa ara na ɛbae. Bere a ɔsɔree anɔpa a okyĩĩ obosu no fii oguan nhwi no mu no, nsu a efii mu bae no yɛɛ ɛsɛn kɛse bi mã. 39 Ɛnna Gideon ka kyerɛɛ nokware Nyankopɔn sɛ: “Mesrɛ wo, mma wo bo mmfuw me; ma menka asɛm biako pɛ. Ma memfa oguan nhwi yi nsɔ ade biako pɛ nhwɛ. Mesrɛ wo ma nhwi no nkutoo nwo, na obosu mfɔw fam hɔ nyinaa.” 40 Na anadwo no, Onyankopɔn yɛɛ saa. Nhwi no nkutoo woe, na obosu fɔw fam hɔ nyinaa.
^ Nea ɛkyerɛ ne, “m’apem.”